စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ထင်ရှားအောင် ကူညီပေးနိုင်သော ကောင်းမွန်သော အမူအလေ့အကျင့် ၆ ခု | Mycanvas
စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ထင်ရှားအောင် ကူညီပေးနိုင်သော ကောင်းမွန်သော အမူအလေ့အကျင့် ၆ ခု
သင်ဟာ နိုင်ငံတကာကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တက်သစ်စလုပ်ငန်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ပြသခြင်းဟာ သင့်လုပ်ငန်းမန်နေဂျာကို အထင်ကြီးစေပြီး သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို မြှင့်တင်ဖို့ အဓိကသော့ချက်ပါပဲ။
ဒီနေ့မှာတော့ သင့်အဖွဲ့အစည်းတွင် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ အာရုံစိုက်မှုနှင့် တန်ဖိုးထားမှုကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် အလုပ်အလေ့အထ ၆ ခုကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
1. အချိန်တိကျပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပါ။
အမြဲနောက်ကျတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေထက် သူဌေးကို ပိုစိတ်ပျက်စေမယ့် အရာလေးတွေပါ။ ကျွမ်းကျင်စွာ ၀တ်စားပြီး အလုပ်သို့ အချိန်မှန် လာပါ (၁၀ မိနစ်စောလျှင် ပိုကောင်းပါသည်။) နာရီကို မကြည့်ပါနဲ့။ ပရောဂျက်များ သို့မဟုတ် တာဝန်များတောင်းဆိုသည့်အခါ နောက်ကျနေပါ။ လုပ်ငန်းမန်နေဂျာများသည် အလုပ်စော၍ရောက်ရှိလာသောဝန်ထမ်းများကို စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရမှတ်များပေးဆောင်သည်ဟု စီးပွားရေးမန်နေဂျာများက ရှုမြင်ကြသည်။ နောက်မှရောက်လာပြီး နောက်မှနေနေခြင်းသည် တူညီသောအထင်ကြီးစရာမဟုတ်ပါဘူး။
2. သတ်မှတ်ရက်များအတွင်း တာဝန်များကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
သတ်မှတ်ရက်များကို လိုက်နာခြင်းသည် သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်သော အရေးကြီးဆုံးအလေ့အထဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တာဝန်များပြီးမြောက်ခြင်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ပြသနိုင်သည့်အပြင် သင့်အဖွဲ့အစည်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် အသင်းဖော်များအပေါ် လေးစားမှုတို့ကို ပြသပေးပါတယ်။ သင်မျှော်လင့်ချက်များနှင့် သတ်မှတ်ရက်များကို ပြည့်မီရန် ပျက်ကွက်သောအခါတွင် သင်သည် လုပ်ငန်းများကို ထိရောက်မှုရှိသောကြောင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတတ်ပါစေ။
3. ကျွမ်းကျင်မှုကို တက်ကြွစွာ သင်ယူပါ။
သင့်အထက်လူကြီးကို အထင်ကြီးစေရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို တက်ကြွစွာရှာဖွေပြီး ရယူရန်ဖြစ်သည်။ သင့်နယ်ပယ်တွင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်းသည် သင့်တွင်ရှိသောအလုပ်အား ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အသုံးဝင်သော်လည်း သင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွင် ရှေ့သို့တက်လိုပါက သင်၏နောက်ထပ်ရာထူးအတွက် လိုအပ်မည့်အရည်အချင်းများကို ရရှိထားသင့်ပါတယ်။
4. လိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါ။
သင့်ဌာန သို့မဟုတ် အဖွဲ့အတွက် မကြာမီအချိန်အတွင်း ပြဿနာများ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်များကို ကြိုမြင်ပါက ၎င်းတို့ကို သင့်မန်နေဂျာနှင့် မျှဝေပါ။ သင်သည် သင်၏တန်ဖိုးရှိသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပြသရုံသာမကဘဲ နှစ်ခုစလုံးသည် လုပ်ငန်းဗျူဟာ၏ နားလည်မှုကိုလည်း ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်ကို မျှဝေခြင်းသည် အဖွဲ့နှင့်ဆောင်ရွက်တတ်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်ဂုဏ်သတင်းကို ခိုင်ခံ့စေပါသည်။
5. ပရောဂျက်များကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက်၊ ဆက်စပ်တာဝန်များနှင့် ပရောဂျက်များကို စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင့်အထင်အမြင်ကို ခိုင်မာစေနိုင်ပါသည်။ အခြားအချိန်များတွင်၊ သင်သည် ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များ သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ရရှိစေမည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုင်ရာ ပရောဂျက်တစ်ခုကို ရေးဆွဲခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် အလုပ်ဖန်တီးရန် စိတ်အားထက်သန်မှုသည် သင့်အလုပ်ဖော်ပြချက်ထက် ကျော်လွန်သွားပြီး သင့်အထက်လူကြီး၏ အာရုံစိုက်မှုကိုလဲ ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။
6. အမှားကို ဝန်ခံပါ။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မိမိ၏တန်ဖိုးကိုပြသနိုင်သည့် အခိုင်မာဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ အမှားများကို ရင်ဆိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းက အမှားပြုလုပ်ကြပေမယ့် ကွာခြားချက်ကတော့ သူတို့နဲ့ သင်ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာပါပဲ။ သင်အမှားလုပ်မိသောအခါတွင် သင့်အထက်လူကြီးအား အသိပေးပြီး အမှားကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် အနာဂတ်တွင် အလားတူအခြေအနေမျိုးကို ရှောင်ရှားရန် အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ တောင်းပန်ရန် မမေ့ပါနှင့်၊ သို့သော် အမှားများမဖြစ်အောင် သေချာစွာကိုင်တွယ်ပါ။